> Resource> Nyefee> otú nyefee Photos si PC ka iPad ikuku
Nweta unbelievably mkpa na ìhè iPad Air? Nke ahụ mara mma! Nke a pụtara iPad Air-ahapụ gị were ya na n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla. N'ihi ya, i nwere ike chọrọ nyefee nza nke faịlụ site na kọmputa gị iPad ikuku. N'etiti faịlụ, foto bụ a ụgbọelu nke gara aga oge. N'inabata photos eweta gị azụ ka ụtọ oge dị ka oge ezumike, ọzọ, reunions na ndị ọzọ. N'ihi ya, eleghị anya ị ga-ahapụ ya n'azụ.
Iji nyefee foto site na kọmputa na-iPad ikuku, iTunes nwere ike ghara gị na-atụ anya, na-ele ya wepụ photos tupu syncing. Ọ ga-abụ a ọdachi mgbe foto gị iPad ikuku bụ mbụ. N'ezie, ime foto transfer, ị ga mma-atụgharị a ọkachamara ọzọ ngwá ọrụ maka enyemaka. The Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondeshare TunesGo (Mac) Ẹda dị ka a dị ike iPad transfer ngwá ọrụ. Na ya, ị na-enwe ike nyefee ọkacha mmasị gị photos na kọmputa gị iPad ikuku na retaining nke ugbu a ndị na iPad ikuku.
Ihe mbụ ị ga-eme bụ ibudata ike Kedo akwa transfer ngwá ọrụ (Windows ma ọ bụ Mac nsụgharị) na kọmputa gị. Wụnye na ẹkedori ya kwekọrọ na ya. Ebe ọ bụ na ma nsụgharị na-arụ ọrụ a yiri nke ahụ, ana m ekpebi na-Windows version dị ka ihe atụ iji gosi otú idetuo foto site na kọmputa na-iPad ikuku.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPad ikuku na PC
Wepụ eriri USB na jikọọ na gị iPad ikuku na kọmputa. Gị iPad ikuku ga-kama ahụrụ na mgbe ahụ gosiri na isi window. Site n'aka ekpe sidebar, ị pụrụ ịhụ media, photos, kọntaktị, ozi na listi ọkpụkpọ na-echekwa na kwekọrọ ekwekọ edemede.
Cheta na: The Mac version anaghị akwado jikwaa na kọntaktị na ozi maka oge ịbụ.
Nzọụkwụ 2. Copy foto site na PC na-iPad ikuku
-Aga n'aka ekpe sidebar na pịa Photos. Na nri panel, ị pụrụ ịhụ Photo Library na igwefoto Roll. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi ịzọpụta dị foto na a ọhụrụ album, ị nwere ike pịa Tinye ike otu. Mgbe ahụ aha ọhụrụ album na imeghe ya. Ọhụrụ album window, pịa obere triangle n'okpuru Add. Họrọ Tinye nchekwa ma ọ bụ Tinye File. Mgbe ahụ, faịlụ nchọgharị window-abịa si. Na-agagharị na kọmputa ruo mgbe chọta gị chọrọ foto nchekwa ma ọ bụ foto. Mgbe ahụ, pịa Open ka a iPad transfer ngwá ọrụ na-enyere gị ibubata foto site na kọmputa na-iPad ikuku.
Otú nyefee Ndi ana-akpo si a Samsung Smartphone ka PC
2 Ụzọ Nyefee Music si Mac ka Android